Ukunyuka kwama-cosmetologists kunye neeplastiki zeplastiki sekuye kwaphela ukuphela kokuba ngumthetho wabasetyhini. Amadoda amaninzi azama ukuphucula ukubonakala kwawo nokuphelisa iimpazamo ezibonakala zibalulekileyo kubo. Phakathi kweenkwenkwezi kwinqanaba lethu kukho ezininzi zamaplastiki. Kule nqanaba, sinokuquka u-Valery Leontiev, owaqala ukuguqula kwii-90 ezide.
Iifoto zikaValery Leontyev phambi kweplastiki
Ukuqala kobugcisa bokudala be-Valery Leontiev buya ngo-1972. Ifoto yomgca woluntu oza kuthiwa ngumntu oneminyaka eli-23 ubudala. Umculi usekude nemifanekiso yakhe ethusayo kwaye ubonakala ethobekile.
Kungekudala uValery waba ngumdlali wecandelo lomculo "Echo". Kwiphepha le-albhamu ibonakala ngomfanekiso wakhe, ofana nokubukeka kwangoku kweso sakhono.
Kwiminyaka engama-80, ukuthandwa kukaLeontiev kwandiswe emva kwemisebenzi emininzi ephumelele kwiindawo ezidumileyo zekonsathi kunye nokusebenzisana okuvelisayo kunye nabaqambi abakhulu. Utshintsho luye lwachaphazela nje kwisitayela sakhe: iingubo ezigqithisileyo kunye nezixhobo ezingavamile kweso sihlandlo.
Indlela ukubukeka kukaValery Leontiev kwatshintsha ngayo emva kokuhlinzwa ngoplastiki
Kungenxa ethile engaziwa xa uValery Leontiev ebeka kuqala kwitafile yokusebenza ukutshintsha ukubonakala kwakhe. Ngokuqinisekileyo, oku kwenzeka kwi-90s, xa uphando lweplastiki lwaqala ukuphuhlisa ngokubanzi ezweni lethu. Ukuba ukhangelelene kwiifoto ezithathiweyo ngeli xesha, unokwazi ukutshintsha kwinqanaba eliphezulu lobuso. Inokwenzeka ukuba, umculi wenza i-blepharoplasty yetyhula yeenkophe.
Akunakunyulwa ukuba umlomo kunye neempumlo zomculi ziye zafumana ukulungiswa okufutshane. Imifanekiso yokuqala ye-2000 ibonisa ukuba imilomo kaValery yaba yinyani kwaye yatshintsha isimo.
Iintatheli ziyamnika uluhlu olupheleleyo lweenkonzo zokuzongcola kunye nophando lweplastiki: utshintsho oluphindaphindiweyo kwimoya yeentloko kunye nemilomo, i-rhinoplasty, i-lipofilling of the cheeks, i-facelifts ezininzi, i-abdominoplasty, i-"injection injections" rhoqo, iimeko zokuvuselela. Iingxaki ezinkulu zibangelwa yi-blepharoplasty, ngenxa yoko umculi wada wavala isikhephe.
Olunye ukuhluleka kwakuyi-facelift, eyabangela ukufuduka kwendlebe.
Oko Valery Leontiev ibonakala ngathi namhlanje
Ngo-2017, u-Valery Leontiev waba neminyaka eyi-68 ubudala. Ngokucacileyo, uzinika ixesha elininzi kunye namandla ekubonakala kwakhe. Unqwenela ukuvuselela kwiklinikhi e-Miami, ehambela ezinye iinkwenkwezi zaseRussia, umzekelo, uLaima Vaikule.
Kungekudala, amajelo asasazeka ngolwazi malunga nokuhlinzwa okwenziwa kwiplastiki entsha, ngenxa yoko inkwenkwezi yatshintshe isimo sayo sempumlo kwaye yenza i-contour ye-cheekbones. Umculi ngokwakhe akaphiki ukuba wayesebenzisa iinkonzo zabagqirha kunye ne-cosmetologists, kodwa uthi wayengaqhelanga ukuba angenelele ukungenelela. Ukongeza, uValery Leontiev ukholelwa ukuba iinkqubo azizange zitshintshe iimpawu zobuso bakhe. Isibambiso sobutsha, ubiza umsebenzi wokwenza umzimba kunye nesondlo esifanelekileyo. Amafayili yomculi ahlukaniswe kwiinkampu ezimbini: abanye bakholelwa ukuba umculi ukhangeleka, abanye - bammangalela ngokusetyenziswa kakubi kweplastiki. Yaye uyavumelana ngani na?
Kuthekani ukuba uthando lokuqala lubuya?
Ubudala beminyaka yabantu
I-apple ebhaka e-pastry
Indlela yokufunda umfazi ukumthanda umyeni wakhe?
Kuthetha ukuthini ukuphatha amazinyo ephupheni?
I-Saladi kunye neebhunge kunye neziqhamo
I-Saladi kunye ne-radish kunye ne-kiwi
Ukutya kweNanapple: ukusebenza kakuhle, imenyu, iimpawu
Shish kebab ukusuka kolwimi